Vaovao - tantaram-pamokarana fantsona tsy misy tohiny
Tamin'ny taona 1960 noho ny famoronana milina diagonaly telo haavo vaovao (fantatra amin'ny anarana hoe Pabrika Transval), dia nivoatra haingana ireo fomba ireo .Ny fikosoham-bary vaovao dia miavaka amin'ny fihodinan'ny fidirana mankeny aoriana izay ahodin'ny familiana hanovana ny mihodina ny zoro, amin'ny alàlan'ny fisorohana ny rambony tsy hamorona triangles izay mahatonga ny karazam-pamokarana ny tahan'ny savaivony ivelany amin'ny hatevin'ny rindrina dia nitarina hatramin'ny 12 ka hatramin'ny 35, izay tsy afaka mamokatra fantsona matevina fotsiny, fa manatsara ny fahafahan'ny famokarana koa.
Ny fomba nentim-paharazana amin'ny famafana paipaika dia ny fihenan-tsolika amin'ny alàlan'ny tsindry rano ary manitatra amin'ny volon'ondry amin'ny alàlan'ny fantsom-boaloboka izay ampidirina mandreloka lava ao anaty kaopy kapilazy amin'ny tsorakazo ary ahena miandalana amin'ny alàlan'ny lavaka maromaro. horonan-taratasy kely maty karazana, ambony nakodia ho fantsona. Ity karazana fomba famokarana ity dia tsy manana fampiasam-bola firy amin'ny fitaovana ary azo ampiasaina amin'ny volavola fanodinana tsy tapaka, afaka mamokatra savaivony hatramin'ny 1070mm, ny hatevin'ny rindrina hatramin'ny 200mm an'ny fantsona matevina fanampiny, fa fahombiazan'ny famokarana ambany, rindrina matevina, lava kokoa ny fantsona noho ny fahombiazany. Taorian'ny fisian'ny fizotran'ny CPE vaovao, ny fantsom-baravarankely dia voahitsakitsaky ny hazo fijaliana ary nitarina ho fantsom-bokatra avy eo ambony aorinan'ny fikatonany, izay maharesy ny fomba nentin-drazana.
Ny lesoka sasany amin'ny famokarana fantsom-pamokarana seamless lasa fomba tsara kokoa amin'ny tombontsoa ara-toekarena.
Amin'ny famokarana fantsom-panafody, ny bileta boribory voahitsakitsaka dia alaina voalohany na averina omena ary avy eo hafanaina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fandroana sira dia hafanaina, ary ny atiny anatiny kosa dia voahosotra diloilo ary ampidirina ao anaty extruder, amin'ny alàlan'ny lavaka maty ary amin'ny alàlan'ny vy ny elanelan'ny volony. eo anelanelan'ny mandrel dia voahidy ho fantsona vy.
Ampiasaina indrindra amin'ny famokarana fantsom-bolo plastika ambany, fantsona miendrika manokana, fantsona mitambatra ary fantsom-by fantsom-boaloboka, sns. Ity fomba ity dia manana famokarana marobe, saingy ambany ny vokatra. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, noho ny akora bobongolo, nohomboana ny lubricants, ny hafainganam-pandeha extrusion sns.
Ny fantsom-pandrefesana coil Rolling guide dia antsoina koa hoe Diessel perillated capillary tube miaraka amin'ny fantsom-by vy mandrelina mandroso lava dia mihodina eo amin'ny vatan'ny takelaka fitarihana. Ny fikosoham-bary dia mitovy amin'ny tsindry hazo fijaliana roa - avo lenta afa-tsy ny takelaka fitarihana raikitra novaina ho lovia fitarihana mavitrika .Ny famokarana mandreloma lava, ny fantsom-by vy malefaka ao anaty rindrina ary tsy misy tohika; Fa be ny vidin'ny fitaovana, ampifanaraho amin'ny sarotra. Ampiasaina matetika izy io mba hamokarana fantsom-by vy misy alim-bary 150mm ho an'ny fampiasana iraisana manaraka. Amin'izao fotoana izao, dia zara raha ampiasaina ary tsy manana fanantenana firoboroboana lehibe.
Ny famokarana fantsom-bokatra dia ho fisaka na poakaty ao anaty masinina manodina amin'ny alàlan'ny fantsom-by vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina manify. Avo lenta, toetra mekanika tsara, refy maro karazana, saingy ambany ny fahombiazan'ny famokarana. Ampiasaina amin'ny famokarana tsy -fantsaka vy metaly marefo, nefa koa ampiasaina bebe kokoa amin'ny famokarana.
Sodina vy: ankoatry ny fitaovana ao an-trano, kaontenera simika ary kojakoja masinina, izay ampiasaina amin'ny indostrian'ny miaramila.
Tamin'ny taona 1970, ny fampiasana ny fomba fihodinana matanjaka dia afaka namokatra savaivony hatramin'ny 6000mm, ny savaivony ary ny hatevin'ny rindrina ny tahan'ny fantsona manify mihoatra ny 10000 savaivony ary ny fantsom-pantsaka miendrika endriny.
Fihodinana mangatsiaka, famokarana sary mangatsiaka ho an'ny famokarana rindrina manify savaivony, fantsom-boaloboka miendrika famolavolana vy ary endriny manokana.
Tamin'ny taona 1960 dia nanomboka nivelatra tamin'ny alàlan'ny haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha sy lava fantsona ary banga lava ny fantsona. Ho fanampin'izany, ny milina fantsom-boalavo mangatsiaka kely dia novolavolaina ihany koa izay ampiasaina amin'ny famokarana fantsona vy tena matevina faran'izay matevina miaraka amin'ny hatevin'ny rindrina latsaky ny 1mm. Sarotra ny fitaovana mihodina mangatsiaka, sarotra ny fanodinana fitaovana, ary ny fanovana karazana sy famaritana dia tsy miovaova. Ny fizotran'ny fizotra mangatsiaka sy ny sary mangatsiaka dia matetika no raisina, izany hoe, ny rindrina dia ahena voalohany amin'ny fihodinan'ny hatsiaka mba hahazoana deformasiona lehibe, ary avy eo karazan-tseza maro karazana azo avy amin'ny makarakara manao sary mangatsiaka.